WBO Zoonii Lixaa irratti maaltu yaadame? – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosWBO Zoonii Lixaa irratti maaltu yaadame?
1. Kaayyoo Duula kanaa
Duulli kun kufaatii duula kanaa dura gageesaman irratti gamagama erga godhee booda kan bahaa jiru dha. Bu’aan gamagama Bilxiginnaa opireeshiniwwan kanaan dura gageesaman irratti godhame hundi fashalaa’uu akka agarsiise irratti walii galamee jira. Sababoota duulli gageesamaa tureefi jiru maaliif akka jalaa kufe adda baafachuufi kan sireesamu sirreesuun duula miilanaatti galuufis socho’aa yoo jiraatan kaayyoo duula kanaa WBO Lixaa Jaal Marroon hooganamu barbadeesuufi gatii kanfalamu kanfaluun Jaal Marroo akka dhuunfaatti dhabamsiisun bu’aa siyaasaa deeggartoota isaanii garee nafx**nyaa gammachiisuufi hamilee qabsoo hidhannoo Oromoo cabsuun duula itti aanu WBO Zoonota biraa irratti banuun Oromiyaa WBO irraa qulqulleessuun Oromiyaa “Free Zone” akka barbaadanitti keessa Socho’an gochuun dhiibbaa naannoo biraa irraa itti dhufu salphisuu kan jedhu dha. Filannoo dhufu fakkeesinee kan darbuu dandeenyu humni kun dura yoo rukutume qofa jechuun lafa taa’eera.
2.Qophiilee akka haala dureetti godhamaa jiran.
– Guutuu Oromiyaatti uummata hiriira baasuun ” Uummati mootummaan akka seera kabachiisu gaafachuu isaa fakkeessuufi duula ta’u booda deeggarsi uummataa akka jiru fakkeessuu
-Loltoota Opireeshinii kana gaggeessan qopheessanii jiru. Loltooti kunis Mooraalee Xollaay, Birshalaqoo fi Bishooftuutti kan leenji’an ta’uu beekameera. Loltooti kun HAO, HAA, Gaardii Repapilikaanii 1,800 ta’an waliin qopheessa yoo jiran RIBis duula kanatti ni hirmaata. Loltooti rukkuttaa Xiyyaaraa fi Helikopteriis bakka barbaachisutti rukkuttaa gageessuuf Bahirdar irraa akka ta’e maddeen odeefannoo ni ibsu.
– Wiirtuuwwaan ajaja waraanaa/Command Centers/ Opireeshinii kun irraa laatamu qopheessuufi gara sanatti humna waraanaa guuranii qopheessuu yoo ta’u bakkeewwan 3 waraanni irraa ka’ee duula gaggeessuuf jedhani adda bahanii jiran kunis,Asoossaa,Gimbii fi Gambeellaa dha.
jaal marroon jaalne wajjiin gaafif deebi waan aja’iba dubate.wari tigraay sibhaatu nagga irrati waan
Gaaffii fi Deebbii Jaal Marroo Amajjii 9, 2021 (Kutaa 1ffaa)